Egwuregwu EPIC Na-ewebata Ọgbaaghara, Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Ya na Mbibi Ya | Site na Linux
Egwuregwu EPIC na-ewebata Chaos ngwa ngwa arụmọrụ ya na injin mbibi
Y anyị na-aga n'ihu na ozi ndị ọzọ gbasara GDC 2019 (Ndị na-emepe emepe egwuregwu Game 2019) nke ndị ntụgharị dị iche iche ewepụtala akwụkwọ akụkọ ha kachasị ọhụrụ na nke Google gosipụtara Stadia nke nyere ọtụtụ ihe iji kwuo maka ya. Nwere ike ịlele biputere banyere ya ebe a na blog.
GDC 2019 a bụ ohere maka Egwuregwu Epic igosipụta ma m na-emefughị ​​ya n'ihi na n'ime ya Ana m ekwuputa iwebata mbipute nke 4.22 nke igwe ihe eji eme ya bụ Unreal Engine (EU) maka imepụta egwuregwu vidiyo na igosipụta mmelite nke anụ ahụ na mbibi arụmọrụ dị elu. Kedu nke ga-eso nsụgharị 4.23 na-esote.
Ezighi ezi Engine 4.22 dị ugbu a na nhụchalụ a na-atụ anya na ọ ga-eru nsụgharị ikpeazụ ya n'ihe dị ka izu abụọ.
1 Akwụkwọ akụkọ ndị isi na Unreal Engine 4.22 ga-enye
1.1 Chaos Physics na Mbibi Engine site EPIC Egwuregwu
Akwụkwọ akụkọ ndị isi na Unreal Engine 4.22 ga-enye
Ebumnuche na-adịghị mma nke 4.22 ka etolitere dị ka ụdị UE4 kachasị ọsọ, na belata oge owuwu na ọtụtụ nkwalite arụmọrụ na njikarịcha.
Versiondị a ga-enye atụmatụ dị oke mkpa dịka ncha ọkụ ray (ụzarị ray), yana ohuru Live ++ hot reload nke ga-arụ ọrụ maka ngbanwe oge, mmekorita ọtụtụ ndị ọrụ na Unreal Editor, nkwalite Niagara VFX, nkwado maka Microsoft HoloLens gụgharia, na ndị ọzọ.
Isi ihe ọzọ dị mkpa na Anyị nwere ike ịkọwapụta ụdị ọhụrụ a nke Unreal Engine 4.22 bụ na nkwado maka ọkpụkpọ egwuregwu Google Stadia ọhụrụ ga-amalite.
Chaos Physics na Mbibi Engine site EPIC Egwuregwu
con Ọgbaaghara, arụmọrụ ya dị elu na arụmọrụ mbibi, Epic kwere nkwa teknụzụ ọhụụ nke mbibi nke na-enye ohere nnochite anya na ezigbo oge na ọkwa dị oke elu nke nkọwa na arụmọrụ.
Epic na-ekwu na enwere ike iji teknụzụ ya na mpaghara iji "nweta onyonyo ogo ihe nkiri n'otu oge na ọnọdụ nwere mbibi buru ibu na njikwa a na-enwetụbeghị ụdị nke ihe okike site n'aka ndị na-ese ihe. '
Ngosipụta iji gosipụta ikike Chaos na-eme n'ụwa nke Robo Recall.
Onye editọ UE4 O jikwa GDC 2019 mee ihe maka mbido mmemme Epic MegaGrant ya.
Como akụkụ nke mmemme a, Epic Games etinyela $ 100 nde iji nyere ndị mmepe egwuregwu, ndị okike mgbasa ozi aka, ụmụ akwụkwọ, ndị nkuzi, ndị nrụpụta ngwa ọrụ yana ndị ọkachamara ndị ọzọ bụ ndị nakweere igwe na-enweghị atụ nke ihe osise.
Zụlite ma ọ bụ rụọ ọrụ iji melite ikike mmeghe nke ikpeazụ maka obodo niile.
MegaGrants Epic pụtara dị ka onye nọchiri usoro Epeal's Unreal Dev Grants, nke nyere onyinye ikpeazụ ya na mbido izu a.
Ewezuga ọkwa a, Epic kwukwara banyere onyinye ịntanetị ha n'efu na Epic, nke kwesiri ka "kwado ma mee ka igba egbe, oru na ntoputa nke egwuregwu di elu maka ndi mmepe."
Ọrụ Epic Online na-enye SDK nke na-arụ ọrụ na igwe egwuregwu ọ bụla, ụlọ ahịa na ikpo okwu ma ọ kwesịrị inyere ndị mmepe aka inye ndị egwuregwu ha otu mmekọrịta, mmekọrịta mmekọrịta.
Ọzọkwa Epic mara ọkwa na ụlọ ahịa etoola ruo 85,000,000 PC Player, ya na mmemme Nkwado-A-Onye Okike karịrị ndị okike 55,000 kpughere na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ egwuregwu iri na abụọ mere ya n'ụlọ ahịa ahụ, yana usoro arụmọrụ nke ụlọ ahịa ahụ.
M na-ekwuputa na ya na Humble Bundle na-emekọrịta ka ndị mmepe nwee ike ire aha site na ụlọ ahịa Epic Games ha na Humble Store, gụnyere ndị nke sitere na ụlọ ahịa Epic.
Epic agaghi enweta ego obula site n’ire egwuregwu zutara site na Humble Store. Mmekọrịta ahụ ga-ebido igodo ndị nwere ike ịgbapụta na ụlọ ahịa Epic Games, n'oge na-adịghị anya Epic ga-enye ndị egwuregwu ohere ijikọ akụkọ Epic na Humble maka ịzụta zụrụ ahịa.
"Ihe ịga nke ọma anyị nwere njikọ chiri anya na ihe ịga nke ọma onye nrụpụta na nkà ihe ọmụma a na-eduzi ihe niile anyị na-eme," ka Tim Sweeney, onye nchoputa na onye isi nke otu ahụ kwuru na ihe omume ahụ.
"Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ inyere ndị mmepe na ngwaọrụ aka ịnye ndị egwuregwu egwuregwu ọfụma karịa."
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Egwuregwu EPIC na-ewebata Chaos ngwa ngwa arụmọrụ ya na injin mbibi
Ntughari ohuru OpenShot 2.4.4 onye editọ vidiyo na-abụghị linear abịarute
PeaZip Free Archiver: Ihe njikwa faili jikọtara faili faili